Cayaaryahanka Andre 'Dede' Ayew - BBC News Somali
Cayaaryahanka Andre 'Dede' Ayew
Image caption Ayew
Andre ‘Dede’ Ayew wuxuu magiciisu u soo baxay si xowli ah balse dhib la’aan ma ahayn.
Cayaaryahankan 21 jirka ah, wuxuu ka soo jeedaa qoys cayaareed magac leh, aabihii Abedi Ayew Pele, wuxuu ahaa sadex jeer cayaaryahananka sanadka ee Africa, adeerkii Kwame Ayew wuxuu u cayaaray kooxda qaranka dalka Ghana isagoo Ghana uga qaybgalay tartankii cayaarihii Olympic-ga sanadkii 1992.
Iyadoo uu qoyskaas ka dhashay, ayaa Dede uu ku qasbanaa in uu si cad isku muujiyo laga bilaabo dhalinyaronimadiisii, waxayna ahayd dhowaan uun markii uu bilaabay in uu magaciisu kor u soo kaco.
Waxaana ay ahayd cayaarihii uu muujiyay tartankii Ghana ay u gashay koobka adduunka 2010, taasoo uu magac gaar ah ku yeeshay.
Tartankaas, waxaa uga horeeyay oo uu isku soo bandhigay si wayn cayaarihiin qaramada qaaradda Africa ee 2010, iyadoo sanad ka hor 2009 uu ka qaybgalay horyaalada dhalinyarada adduunka isagoo captain u ahaa kooxdii Ghana oo noqotay kooxdii ugu horaysay ee Africa ee qaadda koob heerkaas ah.
Sanad ka hor, wax walba way uga duwanaayeen sedan.
Waxaa soo xushay Claude Le Roy, Tababarihii Faransiiska ahaa ee Ghana laylin jiray si uu ugu qaybgalo tartankii qaramada qaaradda Africa sanadkii 2008 inkastoo si ballaaran loo cambeeraynayay, markii uu ku guuldaraystay in uu ka soo muuqdo cayaarahaas dhaleecayntii ayaa ku sii badatay.
Hase yeeshee, si wayn ayuu uga soo kabsaday, iyadoo uu dayn ugu tagay Arles Avignon oo uu ka tagay kooxda Olympic Marseille ka hor intii ugu dambayntii uusan ka dhaadhicin Didiber Deschamps in uu aad u wanaagsan yahay si uu uga mid ahaado kooxda koowaad ee Marseille.
Ilaa hadda xilligan, wuxuu cadeeyay qiimihiin iyadoo uu afar gool u dhaliyay kooxdiisa ka dhisan dalka Faransiiska.
29 koob ayuu wax ka qaaday, iyadoo uu jiro 21 sano, in badan ayaa laga dhowrayaa.
Hadii uu jiro cayaaryahan si joogto ah isu soo shaacbixiyay, ma aha mid kale ee waa Dede Ayew.
Cayaaryahankan dhalinyarada ah, sadex sano ka hor ma ahayn mid la yaqaan iyadoo uu wali u cayaarayay kooxda qaranka Ghana ee da’doodu 17 sano ka hoosayso.
Dad badan ayaa u malaynaya in uu magaca qoyskiisa ku helay ka mid noqoshada kooxda qaranka.
Bal waydii kuwa fikradaas horay u qabay in wali ay aaminsan yihiin.
Hase yeeshee, markii loo dalacsiiyay heerka dhexe iyo heerka sare ee kooxda qaranka, ayaa kalsoonidiisu sii korortay si uu dalkiisa ugu shaqeeyo.
Wuxuu captain u noqday kooxda 20 jirka ka hooseysa ee qaaday koobkii adduunka ee ugu horeeya ee qaaradda heerkaas ka soo hoyso sanadkii 2009.
Muddo aan wax badan fogayn, wuxuu ahaa cayaaryahan muhiim ah oo ka mid ahaa cayaaryahanadii jooga koobka qaramada Africa ee ka dhacayay dalka Angola, halkaas oo kooxda kaalintii uu ka qaatay ay kaga gudubtay semifinal-ka ku gaartay cayaarta kama damabysta ahayd markii ugu horaysay muddo labaatan sano ah.
Inkastoo 1-0 ay uga adkaatay kooxda 7-da jeer qaaday koobka Africa, hadana waxaa kooxda Ghana ka maqnaa cayaaryahanno muhiim ah sida Michael Essien, Stephen Appiah iyo Sulley Muntari.
Isagoo jira 21 sano, ayaa cayaaryahanka kooxda Marseille uu dib ugu laabtay heerka caalamiga ah markii uu ka qaybgalay cayaarihii adduunka ee Koonfur Africa bishii June, waxaa laba jeer loo magacaabay cayaaryahanka tartanka, cayaartii uu soo bandhigay awgeed.
Waxaa isagoo u qalma loo magacaabay cayaaryahanka dhalinyarada ah ee tartanka, balse abaalmarinta waxaa helay Sami Khedira oo Germany u cayaarayay.
Cayaaraha uu Ayew soo bandhigay intii uu kooxdiisa Ghana u cayaarayay waa kuwo aad u sareeya, waana kuwo uu ku mudan yahay in lagu aqoonsado.